Abriil | 2011 | WEEJIDOW
Archive for Abriil, 2011
Saldanadii Gasaargude Iyo Dejintii Mareexaan Q-2aad
Abriil 29, 2011
Saldanooyinkii Caruurtii Garaad Khalaf.
Caruurtii Garaadka xilalka boqortooyada waxay u kala qabteen sida tan:-
wiilkiisii ugu weynaa ee Garaad Liibaan ayaa ugu horeeyey wuxuuna hayey boqortanimada intii u dhaxaysey miilaadiyada 1435- 1470, hijriyadana 855-890.
Wuxuuna ku socdey xukunkii aabihiis oo ahaa DigilMirifle uu ugu garqaadi jirey degmada Luuq.
Garaad Liibaan wuxuu dhintey 1469 miilaadiyada, ka hor waxaa dhintey walaalkiisa Garaad Aamin 1462dii, ka dibna waxaa xukunkii qabtey garaadkii 3aad Garaad Keer, isaguna wuxuu hayey intii u dhaxaysey 1469-1501, wuxuuna fulin jirey xukunkii walaalkiis wuxuuna dhintey Garaad Keer 1501 Miilaadiyada.
Ka dib markuu dhintey walaalkiis Garaad Maamow 1490, ka dibna waxaa la wareegey Garaadkii 5aad Umurow wuxuuna qabtey 1493 wuxuuna hayey muddo 29 sano ah.
Garaad Maamow wuxuu xukunka qabtey 1508dii, waana garaadkii 6aad
Ee uu dhalay Garaad Kalaf wuxuu u xukumi jirey sidii walaalihiis, wuxuuna hayey muddo 28 sano ah asagaa ugu yaraa caruurta , wuxuuna dhintey sanadka markuu ahaa 1536miilaadiyada, waxaana la wareegay wiilkii ugu weynaa Garaadka caruurtiisa oo la aran jirey Garaad Suubow Amin.
wuxuu ahaa garaadkii ugu adkaa garaadada uguna dagaal badnaa, wuxuuna la dagaalami jirey Booran iyo Ajuuraan wuxuuna xukunkiisa gaarey ilaa Filta, Ceelwaaq.
Garaad Suubow wuxuu xukunka ama talada hayey muddo 30 sano, wuxuuna dhintey 1566 Miilaadiyada. Ka dib waxaa la wareegay Garaad Hilowle Garaad Maamow, wuxuuna boqortanimada hayey muddo 28 sano ah, wuxuuna dhintey 1564. kadibna waxaa la wareegey Garaad Dhurow wuxuuna hayey 33 sano wuxuuna dhintey 1597.
ka dibna waxaa la wareegey Garaad Dhurow Max’ed Amin asagana wuxuu fulinayey sidii Garaadadii isaga ka horeeyey wuxuuna u garqaadi jirey DigilMirifle , wuxuuna hayey muddo 29 sano, wuxuuna dhintey 1626.
Ka dibna waxaa la wareegey Garaad Aadan wuxuuna hayey muddo 28 sano, wuxuuna dhintey 1654. waxaana la wareegey Garaad Nuurey wuxuuna hayey muddo 26 sano, wuxuuna dhintay 1680.
Ka dibna waxaa la wareegey Garaad Cabdiyow wuxuuna hayey muddo 36 sano wuxuuna dhintay 1716.waxaa la wareegay Garaad Gaabow wuxuuna hayey muddo 27 sano ah wuxuuna dhintay 1743.
ka dibna waxaa la wareegay Garaad Haafow, wuxuuna hayey muddo 29 sano ah wuxuu dhintay 1809 .
ka dib waxaa la wareegay Garaad Maadow Haafow wuxuuna ahaa ninkii u ogolaadey in beesha Mareexaan wadanka ay soo gasho ka dib markii aysoo galeen magantiisa oo ah sariirtiisa hoosteeda asagoo ka soo cararey col iyo abaar.
Markii ay galayeen sariirta garaadka hoosteeda, Garaadku waa uu maqnaa, waxaana joogay maamulka intiisa kale, markey u diideen in ay qaabilaan oo ay soo dhaweeyaan ayaa waxay galeen sariirta Garaadka hoosteeda, markii ayaa Garaadka fariin loo direy si loogu sheego waxa dhacey, markaas ayuu ku soo laabtey magaaladii Luuq,waxayna sariirta Garaadka hoosteeda ku jireen Sedex Maalmoodmarkaas ayuu kuyiri ka soo baxa muraadkiinana sheegta waa la idin yeelayaaye.
Garaadka waxay weydiisteen in ay soo degaan Gobalka Gedo ayaga iyo dadkii ka dambeeyey, maadaama aysan haysan meel ay u noqdaan.
QM Iyo Ahlu Suna Kulan Ku Yeeshey Qeybo Ka Mid Ah G/ Galgaduud.
Masuuliyiinta maamulka Culumaa’udiinka Ahlu suna Waljamaaca ee degmada Guraceyl ayaa ka warbixiyay kulan ay la qaateen masuuliyiin ka tirsan QM oo indha indheynayay amaanka kuwaasi oo shalay soo gaaray degmooyinka Guraceyl iyo Dhuusa-mareeb ee gobolka Galgaduud
Gudoomiye ku xigeenka degmada Guraceyl Cali Baashi Aadan Diiriye ayaa waxa uu sheegay in waxyaabaha ay ka wada hadleyn wafdiga QM ay ka mid tahay kacan ka geesashada amaanka iyo in ay ficil u badalaan wax qabadkooda taasi oo uu tilmaamay in ay isku afgarteen
Cali Baashi Adan Diiriye ayaa waxa uu sheegay in hey’adaha QM ay mar waliba sheegaan in ay wax u qabanayaan Shacabka Somaaliyeed ee dhibaateysan waxana uu tilmaamay in arintaasi loo baahan yahay in ay ka dhabeeyaan oo ay ugar gaaraan dadka ku dhibaateysan gobolda dhexe ee Somaaliya
Wafdigani ka socday QM ayaa waxa ay ka koobnaayeen ilaa 3-xubnood waxana ka hor inta aysan soo gaarin degmada Guraceyl kulamo kula qaateen xarunta gobolka Galgaduud ee Dhuusa mareeb Gudoomiyaha guud ee Ahlu suna Waljamaaca iyo xubno kale iyagoona sidoo kale wafdiga gaaray degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan
Bohol Bashiir Oo Shabaab Iyo Dowlada Ku Dagaalamey.
Gobalka Gedo ee Koofurta Somalia waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka soconayay dagaalo xoogan oo u dhexeeya Ciidamada dowladda Somalia iyo kuwa Ehlu Sunna Wal-Jameecah oo is garabsanaya iyo Xoogaga Alshabab Al-Mujaahidiin oo ka horjeeda dhinacyadaas.
Hadaba Wararka naga soo gaaraya gobalka Gedo ayaa sheegaya inay wali halkaas ka taagantahay xiisad dagaal oo u dhexeeysa Ciidanka dowladda Somalia iyo kuwa Alshabab Al-Mujaahidiin oo maalmahanba halkaas isku hayay.
Degmada Luuq ee gobalkaas ayaa laga soo sheegayaa dhaq-dhaqaaqyo Ciidan oo ay labadaasi dhinac samaynayaan. Taas oo ka dambeysay dagaal kulul oo Xalay iyo Shalay galab ka dhacay duleedka magalada.
Dagaalkii Shalay wuxuu yimid markii Alshabab ay weerar gaadmo ah kusoo qaaday Ciidamo dowladda ka tirsan oo ku sugnaa halka lagu magacaabo Buhol-Bashiir oo dhanka Bari kaga toosan magalada Luuq oo ay Ciidanka dowladdu maalmahanba maamulayeen.
Lama sheegin khasaaraha ka dhashay dagaalkii Shalay. Laakin illo wareed aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay inay labada dhinac madaafiic xoogan oo illaa Xalay daryankooda la maqlayay is dhaafsadeen.
Ciidamo badan oo kuwa dowladda Somalia iyo Ehlu Sunna oo isgarabsanayo ah maalmahanna gobalka Gedo dagaalo ka dhan ah Alshabab ka waday ayaa laga diray magalada Luuq si ay u tagaan goobta lagu diriray. Waxayna wararku sheegayaan inay Ciidamadaas gurmadka ah ee la diray gaareen halkii lala doonayay oo ay kusii sugnaayeen askar dowladda ah iyo kuwa Alshabab oo la dagaalamaya.
Wali wax dagaalo ah oo Saakay deegaankaas ka dhacaya ma jiraan, laakin xiisad ayaa taagan oo laga cabsi qabo inay dagaal horseedo.
Dhanka magalada Garbahaarey ee gobalka Gedo xarunta u ah oo ay Shalay dowladdu la wareegtayna waxaa lasoo sheegaya inay xaaladeedu dagantahay. Inkastoo Ciidamada dowladda iyo Ehlu Sunnada la socota ay is qaban-qaabinayaan iyagoo doonaya inay weeraraan duleedka magalada iyo goobo ku dhaw dhaw oo ay Alshababkii magalada
Rwanda Oo Mareykanka Ka Codsadey In Soomaaliya Ciidamo U Dirto.
Taliye ku xigeenka taliska ciidamada Maraykanka ee Africa ee AFRICOM Anthony Holmes oo booqasho ku tagay magaalada Kigali ee caasimada wadanka Rwanda ayaa Dawlada wadankaasi kala hadlay sidii ay ciidamo ugu soo diri laheyd dalka Soomaaliya isla markaana ay ka mid noqoto wadamada ka qeyb qaata hawl galada nabad illaalinta ee Midawga Africa ka wado Soomaaliya.
Wakaaladda wararka Shiinaha ee ee Shinwaa ayaa ku waramaysa in Anthony Holmes uu kala hadlay madaxda xukuumada Rwanda inay ku biiraan hawl galka AMISOM ee Soomaaliya ka socda waxaana warku intaa ku darayaa inay sidoo kale ka wada hadleen xaaladaha amaan ee Soomaaliya ka jira.
Afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhiga dalka Rwanda oo lagu magacaabo Korneyl Jiil Ruwataremara ayaa sheegay inay kulan gaar ah oo ay magaalada Kigali ku yeesheen sarkaalkaan ka tirsan taliska AFRICOM iyo mas’uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhiga Rwanda ay isla qaada dhiigeen arrimo badan oo la xariira amaanka wadamada ku yaala bariga qaaradda Africa gaar ahaan tan Soomaaliya.
Afhayeenku waxaa uu sheegay in kulan saacado qaatay oo ay yeesheen Anthony Holmes iyo wasiirka gaashaandhiga Rwanda James Kabarebe ay ka wadleen arrin la xiriirta sida ay dawlada Rwanda ugu biiri karto wadamada ay Soomaaliya ka joogaan ciidamada lagu magacaabo AMISOM.
Afhayeenku ma sheegin inay aqbaleen soo jeedinta sarkaalkaasi Maraykanka ka tirsan hase ahaatee waxaa uu xusay inay daneynayaan arrimaha amaanka Somaaliya sidii wax looga qaban lahaa
Xildhibaan Boqore Oo Ka Soo Horjestey Go`aankii Gudiga Qaranka Dowlada.
Gudoomiye ku xigeenkii hore ee Barlamaanka KMG Xidhibaan Cismaan Cilmi Boqore ayaa waxa uu sheegay in uu kasoo horjeedo go’aankii kasoo baxay Gudiga amniga Qaranka Dowlada ee ku aadanaa in magaalada Muqdisho aysan ka dhici Karin shirar iyo banaanbaxyo aysan waxba ka ugeyn
Xidhibaan Boqore waxa uu sheegay in go’aankaasi uusan aheyn mid wanaagsan islamarkaana uu yahay mid xuriyada looga qaadayo Shacbka waxana uu ugu baaqay Gudiga amniga Qaranka in uu dib uga laabto arintaasi
Dhinaca kale Gudoomiyihii hore ee Barlamaanka Cismaan Cilmi Boqore waxa uu sheegay in wax soconaya aysan aheyn in la hor istaago kulamada Xidhibaanada oo uu sheegay in uu dhigayo Axdiga KMG wax axdiga dhigayana aysan xaq u laheyn Xukuumada in ay hor istaagto
Xalay ayey aheed markii Gudiga amniga Qaranka oo ka kooban saraakiil ciidan iyo Wasiiro ay ka digeyn banaanbaxyo iyo kulamo aysan waxba ka ogeyn oo ka dhaca magaalada Muqdisho
Ciidamada Dowlada Kenya Oo Xirey Masjido Ku Yaala Magaalada Mambaasa.
Waxaa saacadihii aanu kasoo Dhaafney ciidamo ka tirasan Dowlada Kenya ay albaabada isgu dhufteen ilaa sadex masjid oo ku yaala magaalada Mambaasa ee dalkaasi
qaar ka mid ah dadka Somaalida ee ku dhaqan magaaladaasi ayaa waxa ay sheegeen in ciidamo ka tirsan milatatariga iyo booliska Kenya ay xalay hareereeyeen masaajidaasi islamarkaana saaka ay albaabada isgu dhufteen.
Dadkaan ayaa waxaa ay kagaabsanayaan in ay faah faahin ka bixiyaan hadii dadka ku jiray masaajidaasi ay xireen ciidamada iyo sababaha loo bartilmaameedsaday masjidyada oo ay ku cibaadeysan jireen dadka muslimiinta.
balse wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in ciidamada Dowlada mudooyinkii danbe ay baaritaano ku hayeen masaajida ay xireen iyaga oo ka jawaabayay cabasho iyo codsiyo kaga yimid dhalin yarada ku dhaqan magaalada Mambaasa iyo odayaasha kuwaasi oo dalbanayay in xubna ka tirsan dadka degaanka oo u badan Culumaa’udiin ay u fududeeyeen Xarakada Al shabaab in ay daruus diini ah ka jeediyaan masaajida si ugu danbeyn ay uga qeyb qaataan dagaalada Somaaliya ka soconaya.
Ilaa hada ma jiro wax wara oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada Kenya oo ku saabsab xariga loo geystay masjidyadani ku yaala magalada Mambaasa ee dalkaasi.
Dhinaca kale waxaa jira wal wal soo wajahay dadka Somaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobo wixii ka danbeeyay markii saraakiil ka tirsan ciidamada boliska Dowlada Kenya ay sheegeen in rag hubeysan oo ka tirsan Al shabaab ay kasoo talaabeen dhinaca Somaaliya oo ay galeen wadanka Kenya waxana jira baaritaano ciidamada ay ku baadi goobayaan ragaasi
Mahiiga Oo Looga Baaqey In Uu Faraha Kala Baxo Siyaasada Soomaaliya.
Wasiir ku xigeenka gaashaandhiga Xukuumada KMG Somaaliya C/rashiid maxamed Xidig ayaa ugu baaqay Ergeyga gaarka ee QM u qaabilsan arimaha Somaaliya in uu faraha kala baxao arimaha siyaasada Somaaliya oo ay yimaadaan isaga iyo hey’adaha QM magaalada Muqdisho
Wasiir ku xigeenka gaashaandhiga ayaa beeniyay hadal maalmihii danbe la isla dhexmarayay kaasi oo ahaa in ay maqan yihiin ciidamo badan oo Dowlada ah arintaasi oo waxba kama jiraan uu ku tilmaamay ciidamadana uu sheegay in ay dhan yihiin waxaana uu intaa ku daray in ay jiraan ciidamo kale oo lasoo tababaray kuwaasi oo uu sheegay in ay ka qeyb qaadanayaan dagaalada lagula jiro Al shabaab
Ugu danbeyntii C/rashiid Maxamed Xidig waxa uu gaashaanka u daruuray warar sheegaya in uu qilaaf u dhaxeeya Dowlada iyo Raas kanbooni waxana uu tilmaamay in labada ciidan ay yihiin kuwa isgarabsanaya oo Dowlada kawada tirsan
Midawga Africa Oo Soo Dhoweeyay Guulaha Ciidamada Dowlada.
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha amniga iyo nabad galyada ururka Midawga Africa Ramtane Lamamra ayaa waxaa lagu sheegay inay soo dhaweynayaan guulihii ugu dambeeyay ee ay ciidamada dawlada KMG ee Soomaaliya ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay koofurta wadan ka Soomaaliya.
Warkaan oo lagu qoray wakaaladda Wararka ee Walta ee dalka Ethiopia ayaa lagu sheegay in golaha amaanka iyo nabad galyada ay si qoto dheer ula socdaan dagaalada ka socda gobolada koofureed ee Soomaaliya ka jira waxaana uu intaa ku daray inay dhinacooda soo dhaweynayaan .
Ramtane Lamamra waxaa uu warkiisa ku sheegay in sanadkaan gudihiis ay jiraan guulo ay gaareen ciidamada dawlada iyo kuwa AMISOM qorshuhuna yahay sidii Soomaaliya nabad looga dhalin lahaa.
Mas’uulkaan u hadlay midawga Africa ayaa sidoo kale ugu baaqay urur goboleedka IGAD iyo wadamada kale ee daneeya arrimaha wadanka Soomaaliya inay taageeraan dawlada KMG iyo ciidamada AMISOM ee gudaha Soomaaliya ka hawl gala.
Ciidamada dawlada Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay dagaalo ay la galeen dagaalyahanada Al-Shabab waxay sheegteen inay la wareegeen deegaano Shababku horey u maamuli jiray oo koofurta Soomaaliya ku yaala.
Dhoobley Oo Lagu Furey Xaruun Tawabar Ciidan.
Barqanimadii maanta ayaa wafdi uu hogaaminayaan Wasiir ku xigeenka gaashaandhiga C/rashiid Maxamed Xidig iyo taliyihii hore ee ciidamada milatariga Yuusuf Xuseyn Dhuumaal iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan Dowlada Kenya waxa ay gaareen degmada Dhoobleey ee gobolka Jubada hoose
Markii ay halkaasi gaareen labada dhinac ee ka kala socday Dowlada Somaaliya iyo Kenya waxa ay ka qeyb galeen munaasabad xariga looga jarayay xarun cusub oo lagu toobarayo ciidamada milatariga Dowlada taasi oo laga furay degamada Dhoobleey
Taliyaha xaruntaasi cusub ee maanta la hirgaliyay Cismaan cali Ibraahim ayaa waxa uu sheegay in xarada hada ay ku sugan yihiin in ka yar 4-boqol oo askari iyo 28-tababarayaal ah kuwaasi oo uu tilmaamay taliyaha in aysan heysan xaquuqdii ay ku lahaayeen Dowlada
Wasiir ku xigeenka Gaashaandhiga Xukuumada oo ugu danbentii halkaasi ka hadalay ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in hada in ciidamada Dowlada ay u adeegaan dalka waxa laga sugayana ay tahay in dalka ay ka saaraan Al shabaab waxana uu ka dalbaday ciidamada in ay iska ilaaliyaan rag isugu jira ajaanib iyo Somaali oo uu tilmaamay in ay maamulaan qeybo ka mid ah Somaaliya
Ciidamada Dowlada Oo La Wareegeen Gacan Ku Heynta Degmada Garbahaarey.
Ciidamada Dowladda KMG ayaa la wareegay degmada Garbahaarey ee xarunta Gobolka Gedo, kadib markii dhowr jiho ay ka galeen barqanimadii maanta, markii ay isaga baxeen Xarakada Al-Shabaab.
Sida ay sheegayaan wararka Ciidamada Dowladda oo wehliya kuwa Ahlusuna ayaa si nabadgalyo ah kula wareegay, waxaana la sheegay in durba ay dageen saldhigyada degmadaas ay leedahay iyo xarumaha Maamulka.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Saraakiishii Al-Shabaab iyo Ciidamadooda ay ku sugan yihiin duleedka degmada, markii shalay dagaal looga adkaaday Tuulada Barwaaqo oo qiyaastii 30-KM u jirta, halkaasoo dagaal qasaare badan geystay uu ka dhacay.
Gudoomiyaha Gobolka Gedo ee Dowladda KMG Maxamed Cabdi Kaliil ayaa sheegay in Ciidamada Shabaab iyo Mas’uuliyiintooda ay u baxsadeen dhanka degmooyinka Baardheere iyo Buurdhuubo.
Xaalada degmada Garbahaarey ayaa ah mid kacsan, iyadoo dhaq dhaqaaqyo ciidan ay ka jiraan degmadaas oo lagu arkayo Ciidamo iyo gawaari dagaal, waxaana la sheegayaa in Shabaabka ay wadaan abaabul weerar rogaal celis ah.
Dadka fara ku tiriska ee ku haray Garbahaarey ayaa soo sheegaya in degmada lagu arkayo Ciidamo isugu jira Ahlusuna iyo kuwa Dowladda ay gaaf wareegayaan Xaafadaha, iyagoo howl gallo ka wada
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Abriil, 2011.